यौन र जीवन – Page6– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
नाच्दै गाउंदै गाउं गाउंमा नेपाल प्रहरीको ‘बुझौं र बचौं’ कार्यक्रम
धादिङ – नेपाल प्रहरीले महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको अपराध नियन्त्रणका लागि धादिङको गाउं गाउंमा पुगेर मनोरञ्जनात्मक सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्न थालेको छ । नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालयको सांस्कृतिक टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ सँगको संयुक्त पहलमा जिल्लाको भूकम्प प्रभावित ग्रामीण बस्तीहरूमा पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको..
२ सय किलोका केटाले गरे पहिलो पटक सेक्स, धन्न केटी बाँचिन
युरोपेली देशमा प्रेमी प्रमिकाबीच शारीरिक सम्बन्ध हुनु सामान्य मानिन्छ । तर आफ्ना भर्जिन तर अत्याधिक तौल भएका प्रेमीसँग यौन सम्बन्ध राख्दा एक युवतीले झण्डै ज्यान गुमाउनु परेको तथ्य बाहिर आएको छ । मोटे प्रेमीसँग यौन सम्बन्ध राख्दा गम्भीर अवस्थामा पुगेकी ति युवतीलाई चिकित्सकहरुले बँचाएका छन् । अफ्रिका न्यूजपोष्टका अनुसार ग्रेग..
४३ बर्षीया महिलालाई भर्जिन ब्वाइफ्रेन्ड चाहियो !
प्रेममा उमेरको कुनै बन्धन हुँदैन । यहि कुरा एक ४३ बर्षीया महिला ज्याकीले सावित गरेकी छन ।हजुर, भन्नमा ज्याकी ४३ बर्षकी छिन्, तर उनलाइ आफु भन्दा आधी उमेर अर्थात टिनेजर्स ब्वाइका साथमा सेक्स गर्न मन पर्दछ ।यति मात्र हैन, ज्याकीलाइ भर्जिन ब्वाइजका साथमा सेक्स गर्न मन लाग्दछ । अहिले सम्म उनले कयौं युवाहरूका साथमा सेक्स गरिसकेकी छन ।अचम्म त, यी..
पानी माथि सरर दौडने युवति
पानीमाथि हिड्ने भनेपछि कुनै जादुको काम भन्ने सोँच्नुहोला । तर लेन्का ट्यानर कुनै जादुगर होइनन् । न त उनले जादुगरले जस्तै बरफको ढिक्का वा पानीमा तैरिने वस्तुको प्रयोग गर्छिन् । स्लोभाकियाकी यी २८ वर्षे पौडीबाज सिंक्रोनाइज्ड स्विमर हुन् र उनको क्षमताको राज भनेकै उनी पानीमुनि उल्टो भएर पनि हिड्न सक्छिन् र पानीको सतहमा पनि दौडिन सक्छिन्..
यी सात कारणले गर्दा पुरुषले घरबाहिर सम्बन्ध बढाएको हुन्छन् । –
जेठ, काठमाडौं ।जसरी नातालाई नियमीत राख्नको लागि पुरुष र महिला, दुबैको जिम्मेवारी बराबरी हुन्छ । ठीक उसैगरी खत्तम गर्न पनि दुबैको हात हुन्छ । तर महिला महिलाभन्दा पुरुष यो मामलामा अगाडि छन् । भारतदेखि बाहिर देशका करिब ६० प्रतिशत पुरुष आÏनो जिम्मेवारीबाट बँच्न घरबाहिर यसकिसिमको नाता जोड्छन् । खास गरी तीस वर्ष मुनीका यो मामलामा अगाडि..
जहाँ पाहुनालाई आफ्नै श्रीमतीसँग सेक्स गराएर स्वागत गरिन्छ !
काठमाडौं । संसारभरका अनेकौं समाजमा अनौठा अनौठा प्रचलनहरु छन् । र त्यो प्रचलन वर्षाैदेखि चलिआएको छ । हाम्रो समाजमा पनि आफ्नै परम्परा प्रचलनहरु छन् । हाम्रो समाजमा महिलालाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने प्रचलन छ । तर कुनै-कुनै समाजमा महिलालाई पाहुना स्वागत गर्नकै लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ । भारतमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ आफ्नै श्रीमतीसँग सेक्स..
रगत पिउने भूतको डरले लसुन खोज्दै सर्वियाली
पूर्वी युरोपेली देश सर्बियाको एक गाउँमा भुतको डरले मानिसहरु अचेल निकै तर्सित छन् । मानिसको रगत खाने भुत गाउँमा छ भन्ने हल्लालाई उनिहरुलाई निन्द्रा परेको छैन, छैन घरमा लसुन हुनेहरुकोमा भूत पस्दैन भन्ने हल्लाले लसुन खोज्न भ्याईनभ्याई छ । एउटा दन्त्य कथाको जस्तै भुत, कुनै नदि किनारको एक घरमा बस्छ भन्ने हल्ला । जब त्यो नदि किनारको घर..
थरीथरीका ट्वाइलेट जसले तपाइलाई अचम्ममा पार्नेछ…(फोटोहरु)
उपयोगिताले संसारका सबै ट्वाइलेट एकै हुन् । तर बनावट र डिजाइनले भने ट्वाइलेटहरु फरक फरक हुन सक्छन् । संसारमा यस्ता पनि ट्वाइलेट छन् जहाँ छिर्दा तपाई अचम्ममा पर्नुहुन्छ । डराउन पनि सक्नुहुन्छ हास्न पनि सक्नुहुन्छ । केही अचम्मका ट्वाइलेटहरुको फोटो हेर्नुहोस्– एजेन्सिको..
महिलाका तीन स्थान जसले आकर्षक बनाउँछ
लन्डन । प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको..
ओबामाकी छोरीसँग बिहे गर्न अनौठो प्रस्ताव
५० गार्इ, ७० भेडा र ३० बाख्रा दिने प्रस्ताव एजेन्सी : केन्याका एक वकिलले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाकी १६ वर्षीया छोरीसँग बिहे गर्नका लागि अनौठो प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार प्रकाशित समाचार अनुसार केन्याका वकिलले अमेरिकी राष्ट्रपतिकी छोरी मालियासँग बिहेका लागि ५० गार्इ, ७० भेडा र ३० वटा बाख्रा दिने प्रस्ताव गरेका हुन् । नैरोबियन..
अर्काकी स्वास्नी किन ताक्छन् पुरुषहरु ? थाहा पाउनुहोस् –
यौन शब्दको हाम्रो समाजमा खुलेर प्रयोग नगरिएपनि सम्पर्क राख्ने कुरामा अगाडि छन् । हाम्रो समाज मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न समाजमा पुरुषले युवती भन्दा परस्त्रीसँग सम्भोग गर्न मनपराउँछन् । यो मनोवैज्ञानिक स्वाभाव पनि हो । तर, परस्त्रीले पुरुषलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । कुनै कुनै परस्त्री यस्ता हुन्छन् । जसलाई..